संविधान संसोधनको पट्यारलाग्दो बहस « रिपोर्टर्स नेपाल
संविधान संसोधनको पट्यारलाग्दो बहस
प्रकाशित मिति : ५ भाद्र २०७४, सोमबार
काठमाडौ, ५ भदौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबै पक्षका संसद सदस्यहरुले नतिजाको पूर्वअनुमान गरेका कारण ब्यवस्थापिका संसदमा सोमबार पट्यारलाग्दो ठंगले संविधान संसोधन विद्येयकमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
सत्तारुढ दलका सांसदहरु प्रतिपक्षहरुले विद्येयकको विरुद्धमा मतदान गर्ने पूर्वानुमानमा सफल नहुने अनुमानसहित प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन । उनीहरु बाहिरबाट भित्र आउँदै आफ्नो धारणा राखेर संसदको चमेनागृहमा फर्किएर गफिने गरेको देख्न सकिन्छ ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु पनि सरकारले पेश गरेको संविधान संसोधन विद्येयक पारित नहुनेमा ढुक्क देखिदै सरकारले उपयूक्त समयमा विद्येयक नल्याएकोले यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरिरहेका छन । प्रतिपक्षी सांसदहरु समेत आउँदै आफ्नो धारणा राखेर चमेनागृहमा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मितिको विषयमा अनौपचारिक बहसमा ब्यस्त भएको देख्न सकिन्छ ।
संसद भवनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड दुई पटक आएर फर्किए, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि तीन पटक संसद भवनमा आए र फर्किए ।
संसोधन विद्येयक माथिको छलफल चलिरहेको र संसदहरु बोल्ने क्रम जारी रहेपनि संसद भवन भन्दा बढी सांसदहरु चमेनागृहमा देखिन्छन ।
ओलीको भीम रावलमाथि व्यङ्ग्यः राजीनामा ठूलो कुरा होइन, सकिनँ भन्नुभयो
काठमाडौं, ६ कात्तिक । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष भीम रावलमाथि व्यङ्ग्य गर्दै
एमाले महाधिवेशनमा रावलसहित १० नेताको के होला ?
काठमाडौं, ६ कात्तिक । नेकपा एमालेको मंसिरमा तय भएको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली दोहोरिने
भीम बहादुर विश्वकर्माको हत्याविरुद्ध काठमाडौंको माईतीघरमा विरोध प्रदर्शन (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ६ कार्तिक । भीम बहादुर विश्वकर्माको हत्याविरुद्ध आज काठमाडौंको माईतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ ।
भीम रावललाई ऋषि धमलाको प्रश्न : तपाईँले एमाले छोड्न लागेको भन्ने कुरा सत्य हो ? (भिडिओसहित)
नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले आफूले पार्टीबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । आज
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेको छैन, हामी भोलि भेट्दैछौं : अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ (भिडिओसहित)
‘पूर्व न्यायाधीशहरुको फोरमको वक्तव्य नेपाल बारमा आईसकेको छैन्, अहिले धारणा बनेको छैन्” काठमाडौं, ६ कार्तिक
सात प्रदेशमा सरकार गुमाइसक्दा पनि चेत नखुल्ने कस्तो परिपाटी हो: डा. भीम रावल
काठमाडौं, कात्तिक ६ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले सात प्रदेशमा सरकार गुमाइसक्दा पनि